Beats Studio Buds dia mahazo fanamarinana FCC | Avy amin'ny mac aho
Ity dia fivoahana izay mety ho lasa tena zava-misy haingana kokoa noho ny mety hoeritreretin'ny maro amintsika ary toa ireo headphone vaovao ireo Studio Buds, avy amin'ny orinasa Beats, dia efa tokony nandany ny fankatoavan'ny FFC.
Aleo tadidio fa ireny écouteur ireny dia hita tao amin'ny kinova beta an'ny iOS 14.6 RC (Avelao ny Kandidà) ary avy eo dia namoaka ny azy ireo ny haino aman-jery manampahaizana manokana an'ny Apple vaovao avy. Amin'ity tranga ity dia hitan'ny olon'ny MyHealthyApple ny fanamarinana ary taty aoriana 9To5Mac navoakany tao amin'ny tranonkalany izany.
Lojika io fankatoavana io no nankatoavina Tsy manondro ny habeny, ny famolavolana na ny toetra mampiavaka an'ity headphone vaovao ity avy amin'ny orinasa Beats. Fanamarinana fotsiny izy io izay mety hanakaiky kokoa ny famoahana ireo headphone ireo.
Toy ny amin'ny headphones hafa avy amin'ny orinasa izay eo ambanin'ny elo Apple azo inoana fa miseho tampoka ao amin'ny tranokalan'ny orinasa Cupertino ireo tsy mila fampisehoana ofisialy. Ilay Beats Studio Buds vaovao dia hanasongadina ny chip an'i Apple hanolorana pairing eo noho eo miaraka amin'ny fampiasa "Hey Siri" Raha ampitahaina amin'ny Powerbeats Pro amin'izao fotoana izao, ny headphones vaovao Beats dia ho feno habe kokoa.
Tsy mazava ny vidiny ahafahana mandefa ireo telefaona Beats vaovao ireto, saingy raha dinihina fa ny Powerbeats Pro dia manana vidiny 249,95 euro eto amintsika, ireo Studio Buds vaovao ireo dia tokony ho ambany kely ... Ho hitantsika eo ny zava-mitranga ao tapitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Beats Studio Buds dia mahazo fanamarinana FCC